Microtomography - Delta Engineering Belzika
Alatsinainy 16 martsa 2020 by Cristina Maria Sunea
Rafitra CT CT kely
Ity rafitra CT mahomby avo lenta ity dia manangona tahirin-kevitra momba ny geometry anaty sy ivelany.
Ny scanner CT dia maka sary an-tsaina ny tavoahangy feno amin'ny fomba mazava tsara. Io dia ahafahanao manao fanaraha-maso kalitao mandeha ho azy tanteraka, sns.
Published in Microtomography
Zoma 16 Oktobra 2020 by Sara
Rafitra Micro & Nano CT avo lenta avo lenta
Ity rafitra micro & nano CT avo lenta ity dia manangona angon-drakitry geometry anatiny sy ivelany sarotra.
Fampisehoana tampoka Micro & Nano CT System lehibe
Ity rafitra fampisehoana micro & nano CT ambony ity dia manangona tahirin-kevitra momba ny jeometry anatiny sy ivelany.
Micropomography QC famokarana
mbola eo am-pandrosoana - amin'ny taona ho avy